ကျွန်မ မက်တဲ့ငွေမှာ သူတစ်ပါးမျက်ရည်စက်တွေ မပါဘူး – Shinyoon
မင်းတို့မိန်းမတွေက ငွေသိပ်မက်လွန်းတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေ အများကြီးကြားဖူးကြမှာပါ . . . ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်မ ငွေမက်တယ် ။ ဘာကြောင့် ငွေမက်ရလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေမှ အများကြီးပါ ။
ငွေမရှိရင် အပေါင်းအသင်းကြားမှာ မျက်နှာငယ်ရတတ်တယ် . . .ခေါ်ချင်သလို မခေါ်ချင်သလိုလို မျက်နှာတွေနဲ့ အဆက်ဆံ ခံရဖူးပါတယ် ။ လေယူရာသိမ်းတတ်တဲ့ မိတ်ဆွေဆိုတာ သူတို့လိုချင်တာမရှိတော့တာနဲ့ ကိုယ့်ကို အပြစ်ဖို့ပြီး သူတို့ကိုယ်တိုင် နောက်ကျောကို ဓားနဲ့ထိုးတတ်ကြတာမျိုးလေ ။ ဒါတွေ ကျွန်မ ကြုံခဲ့သိခဲ့ရပြီးပါပြီ
ငွေမရှိပဲ နေခဲ့ရဖူးတယ် ၀င်ငွေမရှိပဲ ရပ်တည်ခဲ့ရဖူးတယ် ဖေးမကူညီမယ့်သူ အားပေးနှစ်သစ်မယ့်လူထက် ကိုယ်အားနည်းနေမှန်းသိတဲ့အခါ ထိုးနှက်ကြတဲ့သူတွေချည်းပဲ အဲ့ဒီပါးစပ်ပေါက်တွေကို ငွေနဲ့ပိတ်ပစ်လိုက်လို့ရမှန်း ကျွန်မ သင်ယူခဲ့ရတယ်လေ ။
မိန်းမတွေက ငွေသိပ်မက်လွန်းတယ်လို့ထင်တဲ့ယောက်ျားတွေကိုလဲ မီးဖိုချောင်ထဲ ၀င်ကြည့်စေချင်တယ် ။ ကုန်စျေးနှုန်းဆိုတာ ယုန်လို ပြေးနေတာမျိုးလေ ။ ဒီနေ့တစ်ရာနဲ့ ရချင်ရလိမ့်မယ် မနက်ဖြန် ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲတော့ မသေချာဘူး တစ်ခါလောက်ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တိုင်လေး စျေးလိုက်ကြည့်စေချင်တယ် ။ အဲ့တာမှ ဘာကြောင့်ငွေမက်လဲ ဘာကြောင့် ငွေတွေကုန်လဲ သိနားလည်လာမှာ
ငွေမရှိရင် . . . ဘယ်ဆွေမျိုးမှလဲ အနားကပ်ချင်ကြတာ မဟုတ်ဘူး အမျိုးတော်တာလားလို့မေးရင်တောင် ပါးစပ်ပိတ်ပြီးနေကြလိမ့်မယ် ။ အမှားတွေမရှိပဲနဲ့တောင် သူတို့ဦးအောင် အပုတ်ချတတ်ကြတာမျိုးလေ ။ ဒါတွေကြောင့် ကျွန်မ ငွေမက်တတ်လာတာပါ ။
ချို့တဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးကို အထူးကုကြီးတွေလက်အပ်ဖို့ငွေဆိုတာလိုအပ်တယ်လေ ။ အချိန်တန်ရင် အားလုံးထားခဲ့ရမှာ ဆိုပေမယ့် အချိန်မတန်ခင်တော့ ဘယ်သူက မှ ထွက်မသွားချင်ကြပါဘူး ငါ့မှာသာ ငွေရှိခဲ့ရင်ဆိုတဲ့နောင်တနဲ့ ကျွန်မ မသေဆုံးသွားချင်ဘူး ။ ပြီးရင် ကျွန်မ မိဘတွေရှိသေးတယ် လက်ထဲမှာ ငွေမရှိပဲ ကိုယ့်အဖေ ကိုယ့်အမေဖြစ်ချင်တဲ့အရာလေးတွေကို လုပ်ပေးခွင့်မရလိုက်မှာ ကြောက်တဲ့စိတ်တစ်၀က်နဲ့ ကျွန်မငွေမက်တတ်ခဲ့တာပါ ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်မမက်ထဲ ငွေထဲမှာ သူတစ်ပါးရဲ့ မျက်ရည်တွေနဲ့ ရင်းထားတဲ့ မသထာရေစာတွေ မပါဘူး ကိုယ့်ခြေကိုယ့်လက်နဲ့လုပ်ပြီးရလာတဲ့ ကျွန်မ ချွေးနဲစာလေးကိုပဲ မက်တယ် ။ ကြိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်တပ်ပါ . . . ငွေမက်တဲ့မိန်းမလို့ပြောချင်သလောက်လဲ ပြောပါတယ် ငွေမရှိတဲ့ဘ၀ဟာ ဘယ်လောက်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းလဲဆိုတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ သိတဲ့အတွက် ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်သန့်ပါတယ် ။